Fikambanan’ny zanak’Itasy Mijoro hampandroso ny faritra misy azy
Mbola betsaka ireo olana sedrain’ny Faritra Itasy ankehitriny na dia anisan’ny faritra misy ireo otrikarena maro samihafa aza izy. Anisan’izany ny trondro izay tena mampalaza antsika eto Madagasikara…
Tsy dia afa-mivelona firy anefa ireo mponina any an-toerana noho ny tsy fisian’ny fandriampahalemana. Tsy mandry andro aman’alina izy ireo noho ny firongatry ny asan-dahalo, hany ka teraka ho azy ny fahantrana. Mba ho fanampiana ireo mponina any an-toerana ary dia tafatsangana soa aman-tsara ny fikambanan’ny zanak’Itasy hivondronan’ireo filohan’ny fikambanana mihoatra ny 200 isa. Tanjon’ny fikambanana ny hampandroso ny faritra misy azy, tsy manao politika ary vonona hiara-kiasa amin’izay fitondram-panjakana mijoro. Na izany aza anefa dia efa manana vina manokana ny fikambanana hampandrosoana ny faritra misy azy ary kasain’izy ireo hatolotra ny fitondram-panjakana. Mikasika ny fanabeazana ireo ankizy sy tanora ao aminy manokana dia vonona ny fikambanana handray ny andraikiny ka anisan’ireny ny famerenana ny soatoavina Malagasy hiarovana iretsy voalohany tsy hanaotao foana.